Archive du 20171130
Fifidianana 2018 Misalasala i Andry Rajoelina
Iaraha-mahita ny kapa ranjo ara-politika mety hamotehana ireo kandida atahoran’ny fanjakana HVM amin’ny fifidianana 2018.
Fangaraharan’ny fifidianana Miankina amin’ny HCC, hoy ny pasitera Mailhol
Miankina amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ihany no mampangarahara ny fifidianana amin’ny taona 2018, raha ny fanehoan-kevitry ny filoha mpanorina ny vondrom-pivavahana Apokalipsy sy ny antoko politika Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara na GFFM,
Rivo Rakotovao Ho sahy hampisambotra an’i Lylison ve ?
Mangina tsy misy tohiny intsony ny raharaha momba ny loholona Lylison,
Aza mba marary ihany, fa ahita ny tsy fahita Aza mba hoe tsy Salama, ka tsy afaka hoany ampita Fa dia hanambe tokoa, hanaraka hatramin'ny aina Fahasahiranana avo roa heny, hitombo be ny manaintaina
Paolo Raholinarivo “Tsy maintsy migadra ny depiote Nicolas”
Raikitra ny gidragidra eo amin’ny depiote Nicolas Randrianasolo sy i Paolo Raholinarivo, mpanolotsain’ny praiminisitra. Noho ny resaka asan-dahalo any Betroka no antony.
Fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona Miantso ny minisitry ny serasera hanaja lalàna
Manoloana ny fanapahan-kevitra samirery noraisain’ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana (MCRI) hanangana vaomiera miandraikitra ny fanomezana karatra ho an’ny mpanao gazety,
Eoropa sy Afrika Nikaon-doha momba ny tanora sy ny fampandrosoana
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly tany Abidjan –Cote d’Ivoire ny fihaonana an-tampony faha-5 eo amin’ny vondrona eoropeanina sy ny vondrona afrikanina izay haharitra roa andro.
Fambolena an-tanàn-dehibe Resy lahatra amin’ny tetikasan’ny Ben’ny tanàna ny VOT
Resy lahatra tanteraka amin’ilay tetikasan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana momba ny fambolena an-tanàn-dehibe ny VOT ( vondron’olon-tsotra) tarihin’ny filohany Rtoa Sarah Zoe.
Asa sosialy - HAFARI “Tsy maintsy vitako ny fanambiko”, hoy i Jean Nirina R
Na dia maro aza ny olana nosedrain’ny filohan’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina tamin’ny fanatanterahany ireo asa sosialy entina hanampiana ny mpiara-belona dia nomarihiny manokana omaly fa tsy maintsy vitany ny fanamby napetrany.
Zaza tsy ampy lanja Mihoatra ny 14 % ireo vao teraka manerana ny Nosy
Mbola mihoatra ny 14 % amin’izao ireo zaza vao teraka tsy ampy lanja manerana ny Nosy, hoy ny dokotera Ranjanoro Elodie, angady nananana ilay tetikasa « bebe kangourou ».
Tsy mba manan-kambo !
Vitavita ho azy indray ity resaka fidiran’ny mpitsoa-ponenana sy vahiny tsy fanta-pototra tonga eto Madagasikara ity. Efa mandeha ihany ny famonoana afo ataon’ny mpitondra fanjakana na iraky ny fanjakana vitsivitsy milaza fa olona manao fivahinianana masina sy mitsidika moske eto amintsika ireny.
Mpitatitra amin’ny RN2 Hiverina hiasa sahady anio
Nisy fitokonana nataon’ireo mpitatitra amin’ny lalam-pirenena faharoa na ny RN2 omaly maraina ary nisy ny fanakanana ireo fiara mbola niasa natao teny Ambohimalaza.
Baby shopping andiany faha-5 Mpiara-miasa akaiky ny Top Radio sy Jejoo
Hotanterahina etsy amin’ny lapan’ny tanàna manomboka rahampitso zoma fiandohan’ny volana desambra, haharitra roa andro, ilay hetsika Baby Shopping andiany fahadimy karakarain’ny Prima Baby. Hiavaka tsy ho toy ny mahazatra ny hetsika, hoy Rajaonah Haingo,
Rabodo mpilalao sarimihetsika “Safelika” Nindaosin’ny fahafatesana
Nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-58 taonany afak’omaly talata 28 novambra Raholialisoa Mamy Hortense, fantatra tamin’ny anarana Rabodo tao amin’ilay horonantsarimihetsika Safelika izay novokarin’ny SCOOP digital.
Paikady vaovaon’ny zandarimariam-pirenena Tratra ny tanjona tany Vatovavy Fitovivany
Nidina ifotony tany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, izay notarihan’ny jeneraly Tsirivelo Nicolas,